Umkhiqizi we-High frequency Induction Shrink Fitting Fitting Bearings
Ikhaya / Izicelo / Yehlisa ukufakela / Induction Nciphisa Bearings
Isigaba: Yehlisa ukufakela Tags: induction induction ishwabanisa kufanelekile, amabhere ancipha kufanelekile, lokungeniswa efanelekayo, lokungenisa lokushisa lokushisa, Induction yehlisa ukufakela, ukungeniswa kuncipha ukufudumeza okufanele, ukwenziwa komshini kunciphisa umshini ofanele, Yehlisa ukulungiswa, Nciphisa ama-bearings afanelekayo
Ukukhishwa Kweqile Ukunciphisa Ama-Bearings Ahambisana Ne-IGBT High Frequency Ukushisa Izinyunithi
Inhloso Ukushisa umhlangano wokuthwala okugudluzelayo wokufaka isicelo sokuhlunga
Izinto zokubheja kwe-Steel, diameter 1 "ku-3.5" (25.4 kuya ku-89mm)
Ukushisa kwe-300ºF (150ºC)
I-Frequency 180 kHz
Izinsiza ze-DW-UHF-6kW solid-state induction power supply anesiteshi sokushisa esikude esiqukethe ama-capacitor ama-0.1 μF amabili (inani eliphelele le-0.2 μF), ikhoyili yokufudumeza eyenzelwe futhi yathuthukiswa ngqo kulolu hlelo lokusebenza.
Inqubo Kusetshenziswa ikhoyili yama-helical ejikajika kaningi ukukhiqiza iphethini yokushisa edingekayo. Ukufakwa kufakwa ngaphakathi kwekhoyili yokufudumeza yokungeniswa, i-eksisi yayo ibheke ngqo ku-eksisi yekhoyili ukuletha umfaniswano
ukushisa kumasongo ahlukahlukene wokuthwala. Lokhu kuqinisekisa ukukhula okufanele kwenhlangano ethwele ukuncipha okulandelayo emigodini yensimbi. (Ububanzi obugcwele bobukhulu bokuthwala bungashiswa ngomklamo owodwa wekhoyili.) Upende obonisa izinga lokushisa uqinisekisa ukufana kokushisa nesikhathi esidingekayo ukufinyelela
izinga lokushisa. Imihlangano ethwele ishisa kahle futhi ifinyelela ku-300-350ºF (150-175 ° C) ngemizuzwana engama-30-60. Uma usufudunyezwe, amabheringi angena kalula emiphandeni ngaphandle kokusebenzisa
Imiphumela / Izinzuzo Ikhoyili yama-helical ejika ngamaningi ihambisa ukushisa okufanayo kulo lonke uhla losayizi bokuthwala kumodi eguqukayo. Ukusetshenziswa kwalo mandla kagesi we-singlephase kwenza lula ukufakwa futhi kuthuthukise ukuthwala: uhlelo lokungeniswa lungabekwa enqoleni luthuthelwe ezindaweni zokukhiqiza ezidinga ukushisa kokuncipha.